Uyenza njani iSlicer yexesha kwiDeshibhodi yakho ye-Excel
Isilayi sexesha elisebenzayo sisebenza ngendlela efanayo nesisiki esisemgangathweni, kuba ikuvumela ukuba ucofe itafile ye-pivot usebenzisa indlela yokukhetha ebonakalayo endaweni yeefilitha zakudala zeFilter. Umahluko sisilumkiso sexesha esenzelwe ukusebenza ngokukodwa kwimihlaba yomhla, ukubonelela ngendlela ebonakalayo ebonakalayo yokucoca kunye nokubeka imihla kwitheyibhile yepivot.
Ukwenza isicoci somda wexesha, itafile yakho yepivot kufuneka iqulathe umhlaba apho konke idatha ifomathiwe njengomhla. Akwanelanga ukuba nekholamu yedatha equlathe imihla embalwa. Onke amaxabiso kwicandelo lomhla kufuneka abe ngumhla osemthethweni kwaye afomathiwe enjalo.
Ukwenza isicoci samaxesha, landela la manyathelo:
Beka isikhombisi naphi na ngaphakathi kwetafile ye-pivot emva koko ucofe uhlahlelo lwethebhu kwiRibhoni.
Cofa kwi-tab yomyalelo wokufaka ixesha, kuboniswe apha.
Ukufaka isilayidi samaxesha.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yamaxesha okufaka eboniswe apha iyavela, ikubonisa yonke imihlaba ekhoyo kwitheyibhile yepivot ekhethiweyo.
Khetha imihlaba yomhla ofuna ukuba izilayi zenziwe.
Kwibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yokufaka, khetha imihlaba yomhla ofuna ukuyenzela umgca wexesha.
Emva kokuba isicoci sexesha lakho lenziwe, unokucoca idatha kwitafile yepivot kunye neetshathi zepivot usebenzisa le ndlela yokukhetha idatha. Eli nani lilandelayo libonisa indlela yokukhetha uMar, uMatshi, kunye noMeyi kwisiqwengana sexesha elifanelekileyo elizicoca ngokuzenzekelayo itshathi yepivot.
Cofa ukhetho lomhla wokucoca itafile yakho yepivot okanye itshathi yepivot.
Eli nani lilandelayo libonisa ukuba ungalwandisa njani uluhlu lweesiki kunye nemouse ukubandakanya uluhlu olubanzi lwemihla kumanani akho acociweyo.
Ungalwandisa uluhlu kwisilayidi sexesha elifanelekileyo ukuze ubandakanye idatha engaphezulu kumanani acociweyo.
Ngaba ufuna ukucoca ngokukhawuleza itafile yakho ye-pivot ngekota? Ewe, kulula oko ngesicoci sexesha. Cofa nje kwimenyu yokuhla kwexesha kwaye ukhethe iiKota. Njengoko ubona, ungatshintshela kwiMinyaka okanye kwiintsuku, ukuba kufuneka njalo.
Ngokukhawuleza tshintsha phakathi kweekota, iminyaka, iinyanga kunye neentsuku.
Izisiki maxesha azikho ngasemva ehambelanayo: Zisebenziseka kuphela kwi-Excel 2013 nakwi-Excel 2016. Ukuba uvula incwadi yomsebenzi enezisiki zexesha kwi-Excel 2010 okanye kwiinguqulelo zangaphambili, izicucu zexesha elifanelekileyo ziya kukhubazeka.
ukuya phezulu kwi-vivitrol
Iwindows media player rip cd
uluhlu lokutya okuthambileyo
Amlodipine besylate 10mg iipilisi
Ungathatha i-zyrtec kunye ne-flonase kunye
iziphumo ebezingalindelekanga zovavanyo loxinzelelo lwenyukliya